अभिनेत्री नेहा शर्माको त्यो पुरानो तस्बिर किन भयो भा’इर’ल? कारण एस्तो छ’:: Mero Desh
अभिनेत्री नेहा शर्माको त्यो पुरानो तस्बिर किन भयो भा’इर’ल? कारण एस्तो छ’
Published on: २२ भाद्र २०७८, मंगलवार ०४:०८
काठमाडौं । चर्चित बलिउड अभिनेत्री नेहा शर्माको वर्ष दिन पुरानो तस्बिर अहिले खुबै भा’इर’ल भइरहेको छ । नेहाले ट्वीटरमा आफैंले एउटा सेल्फी पोस्ट गरेकी थिइन् । यो फोटो कुनै होटलको कोठाको जस्तो देखिन्थ्यो । बलिउ डको दुनियाँ बाहिरबाट जति चमकदार देखिन्छ भित्र भने त्यस्तो हुँदैनबलिउडमा
अभिनेत्रीहरु केहीले निकै सफलता पाइरहेका छन् केही भने निकै संघर्ष गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ केही कलाकार आफैंले चाहेर वि’वा’दित बन्छन् भने केहीलाई अरुले वि’वादित बनाइदिन्छन् । अरुका कारण बद’नाम हुनुपर्ने अनित्रीको सुचीमा नेहाको नाम पनि आएको हो ।एउटा सेल्फी अरु कसैले सम्पादन गरेर
ट्वीटरमा अपलोड गरिदिँदा उनले धेरै बद’नामी खेप्नु परेको थियो । अहिले उनको त्यही तस्विर भाइरल भइरहेको छ । उनले आफ्नो फोटो सम्पादन गरेको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरिन् ‘आखिर मानिसहरु क तिसम्म तल झर्न सक्छन् ?’ नेहाले ट्वीटरमा आफैंले एउटा सेल्फी पोस्ट गरेकी थिइन् । उनले अपलोड गरेको फोटो सामान्य थियो
तर कसैले यो फोटो डाउनलोड गरेर सम्पादन गरी पुनः ट्वीटरमा पोस्ट गरिदियो ।ती व्यक्तिले यो फोटो एडिट गरेर त्यसमा से’क्स टो’य थपिदिएका कारण नेहाको फोटो निकै भाइरल भयो । केही प्रयोगकर्ताले यसलाई साँच्चैको ठानेर रिट्वीट गरिदिँदा यो फोटो त्यो बेला खुबै भा’इरल भएको थियो । यसका कारण नेहाले ब’द’नामीको सामना गर्नुपर्यो ।
फोटो भा’इरल भएपटि ट्वीटरमा विभिन्न प्रतिक्रिया आउन थाले । केहीले कुरै नबुझी नेहालाई अ’पशब्द समेत भन्न भ्याए केहीले भने नेहाको साथ दिए । जब यो फोटो स्वयं नेहाले देखिन् त्यसपछि उनले वास्तविक फोटो पोस्ट गर्दै यो सबै फोटो बि’गा’रेर बद’नाम गराउने ग’लत नियतले गरिएको बताइन् । त्यसपछि नेहालाई गा’ली गर्नेहरुको भीड कम भएको छ । उनको भाइरल तस्बिर